AirPod-yada cusub uma dhici doonaan sidii hore ee EarPods-kii hore | Wararka IPhone
AirPod-yada cusub uma dhici doonaan sida ugu fudud ee EarPods-kii hore
Waxay ahayd Arbacadii la soo dhaafay markii wiilashii guriga ku jiray ay noo muujiyeen waxa inbadan oo naga mid ah ay doonayeen inay arkaan, sida loo xaliyo dhibaatada abuurista dhaga-weyne wireless. Wax aad u dhib badan maaddaama dhammaan kuwa suuqa ku jira (dhegta) ay leeyihiin astaamo muuqaal ahaaneed oo isku mid ah oo ay tahay Apple inay wax qabato ... Kuwa ugu fiican? ka saar fiilada qaabeynta EarPods, taasi waa, AirPods.
Qaarkood sameecado dhagaha cusub oo casri ah oo lala yaabo iyo wax badan, maxaa yeelay jir ahaan waxay leeyihiin naqshad la mid ah kuwii hore, laakiin hadda bilaa xarig waxaan leenahay qalab cusub oo casri ah oo ka socda Apple, makarafoon, dareemayaal dhawaansho, iyo dareemayaal taabasho (dheg walba). Waxaan wajaheynaa headphones-ka ugu caqliga badan xilligan. Laakiin, Weligaa miyaanad hoos u dhigin EarPods-kaaga hore markaad ordayso ama xitaa aad socoto?,maxaa ku dhici doona AirPods oo ilaaliya isla qaabeynta jirka?, sida muuqata Apple wuxuu ka fikiray arrintan ... Maya, sida muuqata waa inaysan si fudud u dhicin.
Waana waxaan qiyaasayaa anigoo sugaya tareenka dhulka hoostiisa ah inta aan dhageysanayo muusikada, iyo daqiiqad kasta mid ka mid ah AirPodskeyga ayaa tagaya salka moolka, ma dhici karto laakiin cabsida ayaa jirta, gaar ahaan markii aad qarashgareysay 179 €... Laakiin warbixinnadii ugu dambeeyay ee saxafiyiinta awood u yeeshay inay tijaabiyaan AirPod-yada cusub ayaa sheegaya inaysan si sahal ah uga dhici doonin dhegahayaga ...
Waan cayaaray Madaxa ayaan kolba dhinac u dhaqaaqay, Waxaan taabtay timahayga, waan booday, waxaan umuuqday nacasnimo waxyaalahaas oo dhan. Apple AirPods wali wey taagnaayeen, oo si sax ah ayey u shaqeynayeen. Muusigga aan garaacayay ayaa ka dhawaajiyay heer aad u wanaagsan mana jiro buuq hareerahayga ka socda oo igu dhibay inaan dhagaysto. Aad ayaan ula dhacay.
Waad awooday inaad aqriso warbixinta aan kahadleyno, waxaan si daacad ah u aaminsanahay Apple waxay si wanaagsan u guteen shaqadooda guriga lagumana soo bandhigi doono suuqa iyagoo leh sameecado maqal ah oo daqiiqad walba dhici kara. Qaar ka mid ah AirPods ee aragtidayda waa inay la jaanqaado iPhone 7 cusub, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa waxay noqon doonaan iibiyaha ugu fiican markay bilaabayaan Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirPod-yada cusub uma dhici doonaan sida ugu fudud ee EarPods-kii hore
Ok oo waan imid waana rumaysanahay, waan iibsadaa iyaga oo garaaca isla markiiba way dhacaan. Kuwa ugu fiican ayaa ah nooca dhegta
Waa hagaag, waxaan u maleynayaa in tufaaxu mararka qaarkood uu ka gudbo nadaafad ahaan naqshadaha nadiifka ah, qalab qaali ah oo jilicsan oo tiknoolajiyad casri ah oo aad u fara badan gudaha ku dhex leeyahay waa inuu lahaadaa taageero la mid ah dhegta kale, ee ku hareereysan dhagta gadaashiisa, xitaa haddii ay hal milimitir ka qaadato ee bilicsanaanta.
Ku jawaab hupa77
Aniguna waan tagayaa waana inaan aaminsanahay sababta aad u tiraahdo iyo yaa isku dayay in muddo ah kharashaadka la bixiyay. Miyaynaan ogeyn naqshadaas iyo qaab dhismeedkayagu? Naqshaddaasi kuma habo bini'aadam badan…. Waan rumaysan karayey hadday dhegta ku jiraan, laakiin qaababka dhegaha qaarkood, qaabeyntaasi waa fiasco…. Oo hadda fiasco aad u qaali ah.
Ku jawaab rotelo
3GB oo RAM ah ayaa lagu xaqiijiyay iPhone 7 Plus
Sawirada Google waxay gaarayaan nooca 2.0 iyagoo wata warar muhiim ah